Kitra – Fosa Junior Boeny: nisaoran’ny ekipa ihany koa i Lekadoda - ewa.mg
Kitra – Fosa Junior Boeny: nisaoran’ny ekipa ihany koa i Lekadoda
News - Kitra – Fosa Junior Boeny: nisaoran’ny ekipa ihany koa i Lekadoda
Manamboatra ny ekipany,
amin’izao fotoana izao, ny Fosa Junior Boeny. Mbola miandry ny
fiavian’ilay mpanazatra italianina ihany koa ny rehetra. Ankoatra
izay, efa manomboka ny fanomanan-tena.
Ao anatin’ny fanomanana ny
taom-pilalaovana 2021, amin’izao fotoana izao, ny ekipan’ny Fosa Jr
Boeny. Ankoatra izay, eo am-panamboarana ny firafitry ny mpilalao
ihany koa ireo teknisianina, mandra-piavian’i Salvatore Nobile,
mpanazatra vaovaon’ny ekipa, ho tonga amin’ny faran’ny volana
oktobra izao, raha tsy misy ny fiovana.
Fantatra fa ankoatra ny fialan’i
Baggio, nandeha tamin’ny nahim-pony, nisaoran’ny Fosa Junior kosa i
Lekadoda. Nambaran’i Titi Rasoanaivo, tale teknikan’ny ekipa fa tsy
mbola misy fiantsoana mpilalao vaovao hanatevina ny Fosa Jr, fa
nampakatra ireo zandrikely hilalao ao amin’ny D1. Efa ao anatin’ny
fanazarantena, ankehitriny, ny Fosa Jr ka ny tanjaka ara-batana
aloha no nanombohany izany.
Tsy mieritreritra ny hiatrika ny
fifaninanana afrikanina ny Fosa Jr, na eo aza ny fahazoan-dalana
hanao izany, noho ny antony maro. Anisan’ny goavana amin’izany ny
tsy fahampian’ny fihaonana sy ny lalao eo amin’ireo mpilalaony. Eo
ihany koa anefa ny ho enti-manana miatrika izany satria mbola ao
anatin’ny fahasahiranana ara-bola ny klioba.
Na izany aza, mbola miandry ny
fahatongavan’i Salvatore Nobile ny rehetra, ny amin’izay ho
fandaharam-potoana sy ny hatao hiatrehana ny fifaninanana rehetra
Marihina fa mbola ny talata 20
oktobra ho avy izao ny fe-potoana farany handefasana ny anaran’ireo
ekipa roa hiatrika ny fifaninanana afrikana dia ny fiadiana ny ho
tompondaka sy ny amboara, any amin’ny kaonfederasiona afrikanina
(Caf). Raha ny zava-misy, tsy misy maneho fahavononana hiatrika
izany ireo ekipa roa niatrika izany, tamin’ny taon-dasa dia ny Fosa
Jr sy ny CNaPS Sport. Hotapahina mandritra ny fivorian’ny komity
mpitantana eo anivon’ny federasiona Malagasy (FMF), amin’ny
herinandro ambony ny amin’izay ho solontenan’i Madagasikara.
L’article Kitra – Fosa Junior Boeny: nisaoran’ny ekipa ihany koa i Lekadoda a été récupéré chez Newsmada.
Hatolotra ny Fampanoavana, anio, ireo polisy voatondro ho nikasi-tanana sy nandratra raim-pianakaviana, teny Ampitatafika, ny faran’ny herinandro lasa teo. Nambaran’ny avy amin’ny Polisim-pirenena fa sady hoenjehina ara-pitsipi-pifehezana izy ireo no vesaran’ny ady heloka eny amin’ny Fitsarana. L’article Polisy nikasi-tanana est apparu en premier sur AoRaha.
Tranga tetsy analakely :: Nitangoronan’ny olona ilay frantsay nikasi-tanana mpivarotra
Nenjehin’ny andian’ olona maromaro sy nitangoronan’ izy ireo, tetsy Andohan’ Analakely, ny lehilahy iray teratany frantsay, ny antoandron’ ny sabotsy lasa teo. Voatondro ho nikasi-tanana vehivavy mpivarotra izy. Fantatra fa notsaboina teny amin’ny hopitaly ilay mpivarotra. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana rehetra tamin’ity tranga ity. Hatao famotorana ilay frantsay. Nametraka fitoriana rahateo ilay mpivarotra niharan’ ny herisetra araka ny nambaran’ ny polisy eny Tsaralalàna misahana ny famotorana. Nitondra fiara tsy mataho-dalana nandalo tetsy Analakely ny lehilahy iray frantsay, tamin’io antoandro io. Nahitsaka entam-barotra an’ny vehivavy iray teny an-toerana izy ka velona ny disadisa, araka ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny polisy. «Notifirin’io lehilahy io tamin’ny « big boss » ilay vehivavy mpivarotra. Tezitra ny olona ka nanenjika azy », hoy ny polisy. Tafajanona tamin’ny fitohanan’ny fiara teo Andohan’Analakely ilay vahiny. Nihamaro ny olona nanenjika sy nitangorona teo aminy.Vaky voatoraka ny varavaram-pitaratry ny fiarany. Nandray andraikitra avy hatrany ny polisy niasa teo akaiky teo naka sy niaro an’ilay lehilahy frantsay. «Nifamahofaho ny resaka, avy eo. Nisy nilaza fa nikasa hangala-jaza io lehilahy io. Nisy kosa no niteny fa avy nanao loza ny fiara noentiny. Naterina teny amin’ny polisy misahana ny herisetra mianjady amin’ny zaza tsy ampy taona izy nalaina am-bavany. Noraisina ihany koa ny mombamomba azy», hoy ihany ny polisy. Tonga teny amin’ny Kaomisaria foibe tetsy Tsaralalàna ilay vehivavy mpivarotra, nony hariva, nametraka fitoriana. Noho ny vono sy fandratrana niniana natao taminy no antony nitoriany an’ilay teratany vahiny. Voalaza fa hampanantsoina hatao famotorana, anio, ny mpitory sy ilay lehilahy frantsay. L’article Tranga tetsy analakely :: Nitangoronan’ny olona ilay frantsay nikasi-tanana mpivarotra est apparu en premier sur AoRaha.
Fampitaovana: nomen’ny Orange fanamiana ny Makis vehivavy
Natolotra ireo mpilalaon’ny Makis de Madagascar, sokajy vehivavy teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, omaly, ireo “tee-shirt” sy kitapo avy amin’ny orinasan-tserasera Orange Madagascar. Ho fanampiana sy fampirisihina ny ekipam-pirenena ny anton’izany, araka ny voalazan’ny mpanolotra. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasany amin’ny Malagasy rugby.Ny Makis de Madagascar, izay ao anatin’ny fanomanantena amin’ny fiatrehana ny lalao sakana, hiadian-toerana amin’ny lalao Olympika, tanterahina any Japon ny taona 2021. Hatreto anefa tsy mbola fantatra marina izay tena firenena hampiantrano io fifanintsanana io. Raha ny voalahatra, i Frantsa no efa voatondro hanatontosana izany, saingy fantatra fa hiditra amin’ny andiany faharoa amin’ny fihibohana indray ry zareo ka tsy ho raikitra izany. Ankoatra izay, tsy ho afaka handray anjara amin’ilay “tournoi”, kasaina hatao atsy Afrika atsimo ihany koa i Tonizia ka i Madagasikara sy i Kenya ary ry zareo mpampiantrano sisa no hiatrika izany.Marihina fa fihaonana fanomanana ho an’ny ekipa telo tonta hiatrehana io fifanintsanana ho an’ny lalao Olympika io izany. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny toerana sy ny daty hanatontosana ny lalao. TompondakaL’article Fampitaovana: nomen’ny Orange fanamiana ny Makis vehivavy a été récupéré chez Newsmada.